Salaamanews » Taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku dhaawacmay Muqdisho
Home » Warar Taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku dhaawacmay Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 4th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Maxaad ka Xusuusataa Kacaankii 21-kii OctoberCol. Barre Hiiraale oo isku sheegay madaxweynaha Jubba-land ayaa Gedo ka helay ciidamo gurmad ahWufuud ka socota dowladda, Midowga Africa, iyo Qaramada midoobay oo gaaray KismaayoMadaxweyne Faroole oo Furanaya Xisbi Siyaasadeed oo ka hir gala PuntlandPuntland oo qabatay rag lagu eedeeyay weerarkii xawaaladda Kaah
(Salaamanews)-Taliyaha Ciidamada ilaalada wadooyinka (Taraafiko) Jen. Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) ayaa maanta lagu dhaawacay magaalada Muqdisho, waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta keentay dhaawaca taliyaha.
Jen. Cali Gaab ayaa barqanimadii maanta ku dhaawacmay agagaarka Xaafada 21-October ee degmada Waabari, kadib markii askari ka tirsan dowladda ay qori isla qabsadeen.
Tags: warar « Qoraalkii HoreAMISOM waxay u hanjabtay kooxda Al-shabaab	Qoraalka Xiga »Dagaalkii ugu xooganaa oo isqabsaday deegaanno ku dhaw magaalada Jowhar	Halkan Hoose ku Jawaab